Xogta laga Samsung S4 wareejiyo Fiiro 4 / Note 3 Si fudud
> Resource > Transfer > Data Transfer ka Samsung S4 in Ogow 4 / Note 3 Si fudud
Waxaan doondoonayaa sida ugu wanaagsan ee ay u guuraan, ma aha oo kaliya xiriirada aan, laakiin fariimaha qoraalka ah, emails, iyo barnaamijyadooda (horumarka sameeyey in kulan) ka S4 Galaxy ee Fiiri 3. waan ogahay waxaa jira xoogaa fursado kala duwan oo la software si taas loo sameeyo. Iyo talo kasta oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee ay u gudbiyaan wax walba?
Waxaa la go'aamiyey in ay beddelaan aad Samsung Galaxy S4 in Galaxy Note 4 ama Fiiro 3? Mar walba waa ay fududahay in la beddelo telefoonka. Marka ay timaado in xog ka S4 gudbaayo Fiiro 4 / Note 3, waxaa laga yaabaa in aad dareento in yar ka careysan. In kasta oo aad qabto fududahay in kaarka SD ku helaan, kaliya aad ku wareejin kartaa music, sawiro iyo videos u dhexeeya labada telefoonada. Sida xiriirada, waxaad tahay inay awoodaan inay u hagaagsan account Google ee aad Note 3 ama 4 Fiiro gaar ah ama geliso kaarka SIM in Ogow 3 ama Fiiro 4. Si kastaba ha ahaatee, taasi oo dhan ee aad sameyn kartid. Maxaa dhacaya haddii aad rabto in lagu wareejiyo barnaamijyadooda, abuse call iyo fariimaha qoraalka ah? Dhammaan xogta, kuwaas oo aan si fudud loo wareejin karaa.
Raadinta siyaabo in aad nuqulka xogta ka Samsung S4 in Ogow 3 ama 4 Fiiro gaar ah? Halkan jooji. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu soo bandhigo ah kala iibsiga phone qalab hal-click - Wondershare MobileTrans oo aad taageero ka sawiri kartaa. Iyada oo ay taasi qalab kala iibsiga telefoonka, aad awoodaan si ay u gudbiyaan oo dhan laga daadiyo, fariimaha qoraalka ah, videos, music, sawiro, abuse wac, jadwalka iyo xiriirada ka Samsung S4 in Samsung Note 4 ama Fiiro 3 1 click.
Waxyaabaha loo baahan yahay: Samsung S4, Note Samsung 3 / Note 4, 2 USB fiilooyinka Android, mid computer iyo Wondershare MobileTrans
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan qalab kala iibsiga telefoonka
Si aan ku bilaabo, ku dhameysan rakibida qalab kala iibsiga telefoonka. Waxaa Launch oo uu furmo suuqa hoose muujinaysaa ilaa. Connect aad Samsung Galaxy S4 iyo Fiiro 3 kombiyuutarka via 2 USB fiilooyinka.
Tallaabada 2. Dooro Phone in Transfer Phone
In uu furmo suuqa hoose, guji Phone in Transfer Phone . Markaas ee pop-up ee soo socota, Waxaad labada telefoonada aad ogaan barnaamijka arki doonaa.
Tallaabada 3. xog Transfer ka S4 in Ogow 3 / Note 4
Sida waxaa lagu muujiyey in uu furmo suuqa hoose, dhammaan xogta ay ka mid yihiin xiriirada, abuse wac, music, fariimaha qoraalka ah, videos, sawiro, jadwalka iyo barnaamijyadaba waxaa lagu saxay. Marka aadan rabin in aad nuqulka nooc ka mid ah xogta, waa in aad ka saarto marks waxay hor. Markaas, riix Start Copy inuu ku soo bilowdo S4 ay u Fiiro 3 / Note 4 wareejinta xogta.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad si guul transfered xogta ka S4 in Ogow 4 / Note 3.
2 Siyaabaha Bedelka Faylal ay ka Fiiro 2 ilaa 3 Ogow
Sida loo kaabta Samsung Galaxy Note 3
Kala iibsiga Apps, SMS, Media, wac Log, Calendar & Xiriirada ka HTC in Samsung
Senuti u Mac - Tool The Best inuu ka soo kabsado Music ka iPod & iPhone
Top Senuti for Windows Barnaamijyada inuu ka soo kabsado Music ka iPhone iyo iPod
Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka fiidiyo ugu Computer
3 Siyaabo si ay u gudbiyaan Video From iPhone in iPad
2 siyaabaha ay u gudbiyaan xiriirada Google inay iPhone
Sida loo Demi Xogta laga Blackberry in Windows Phone
2 Siyaabaha Bedelka Music ka Lugood in HTC Mid ka mid ah
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada in Nexus 4
Transfer Xiriirada, Video, Photos, Calendar, iMessage iyo Music ka iPod in HTC
Sida loo saar Baararka Black aan Tayada Bahdilka